आफूले माया गर्नेलाई कसरी बिर्सने ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
माया गर्नेलाई कसरी भुल्ने । हामी सबै हाम्रो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा प्रेममा परेका छौं। रोमांच, हाँसो, रात्रिभोज, रिस, ... अर्को व्यक्तिसँग विशेष क्षणहरू बिताउने र यो कहिल्यै समाप्त नहोस् भन्ने चाहना, तर दुर्भाग्यवश सधैं यस्तो हुँदैन।
यद्यपि यो फेला पार्न आदर्श हुनेछ जीवनको लागि उत्तम व्यक्ति, यो सधैं हासिल हुँदैन। यो हुन सक्छ कि तपाईंसँग समान लक्ष्यहरू छैनन् वा तपाईंको जीवन, अधिक बिना, अलग हुनुपर्छ। ठूलो दुविधा यहीँ आउँछ, माया गर्नेलाई कसरी भुल्ने ?
यस लेखमा हामी सुझावहरूको एक श्रृंखला दिन जाँदैछौं पुरानो प्रेम बिर्सन मद्दत गर्नुहोस् र तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, के तपाईं यसलाई पढ्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
1 कसरी बिर्सने तिमिले मन पराउने को पाइला पछी
1.1 १. सञ्चार बन्द गर्नुहोस्
1.2 २. अर्को व्यक्तिको बारेमा सोच्न अपरिहार्य छ
1.3 3. तपाईंको बारेमा सोच्नुहोस्
1.4 ४. आफूले विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस्
1.5 5. मानिसहरूबाट प्रेरित हुनुहोस् जसले यसलाई पार गरेका छन्
1.6 6. पीडा संग धैर्य हुनुहोस्
1.7 7. वर्तमानमा फोकस गर्नुहोस्
1.8 ८. आफ्नो पूर्वका कमजोरीहरू सम्झनुहोस्
1.9 9. तपाईलाई मनपर्ने कुरामा लगानी गर्नुहोस्
1.10 10. आफैलाई दोष नदिनुहोस्
1.11 11. आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई बिर्सनका लागि मन्त्रहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्
कसरी बिर्सने तिमिले मन पराउने को पाइला पछी
अर्को हामी तपाईंलाई दिन लाग्नेछौं 12 सुझावहरू ताकि तपाईं पूरा गर्नुहुन्छ र तपाईंले कसलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने बिर्सने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो जीवन जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
१. सञ्चार बन्द गर्नुहोस्
आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई कसरी बिर्सने भन्ने बारे हामीले दिने पहिलो सल्लाह भनेको पूर्वसँगको सञ्चारलाई बन्द गर्नु हो । चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा होस्, सामाजिक सञ्जालमा, वा फोनमा, ब्रेकअप पछि सम्पर्कमा रहँदा मात्र तपाईंको घाउहरू फेरि खुल्नेछ। धेरै मानिसहरूले यो कदमलाई बेवास्ता गर्छन् र आफ्नो पूर्वलाई जित्नको लागि आफ्नो भावनात्मक उपचारलाई पन्छाएर पुनः दोहोर्याउन सक्छन्।
यदि तपाइँ संचार काट्न सक्षम हुनुहुन्न भने, तपाइँ शायद नै यो प्रेम बिर्सनुहुनेछ, सम्बन्ध दुखाइ भए पनि। साथै, तपाईंले गर्नुपर्छ वस्तुहरू र उपहारहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस् उसले तपाईलाई उसको बारेमा सोच्नबाट जोगिनको लागि दियो।
२. अर्को व्यक्तिको बारेमा सोच्न अपरिहार्य छ
सुन्दा अन्योल लागे पनि, जति धेरै तपाईंले अर्को व्यक्तिको बारेमा सोच्न प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईंले उनीहरूको बारेमा सोच्नुहुनेछ। मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, जब हामी पूर्वको बारेमा बिर्सने प्रयास गर्छौं, हामीलाई उल्टो असर हुन्छ। हामी हाम्रो सोचलाई याद नगर्ने कुरामा केन्द्रित गर्दछौं, त्यसैले तपाइँ पहिले नै त्यो व्यक्तिको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ।
जबरजस्ती नगर्नुहोस्, यो अपरिहार्य छ कि कहिलेकाहीँ ती पलहरू जुन तपाईले जिउनुभएको दिमागमा आउँछ। बस पागल नहुनुहोस् यसको साथ र अगाडि बढ्नुहोस्।
3. तपाईंको बारेमा सोच्नुहोस्
आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई कसरी बिर्सने भन्ने कुरा बुझ्न खोजीमा तनाव, थकान र चिन्ताका कारण लतहरू विकास गर्न सकिन्छ। यी सबैको सामना गर्न नकरात्मक प्रभावहरू तपाईंले आराम र आराम गर्नुपर्छ। यस समयमा तपाईका आवश्यकताहरू के छन् भनेर तपाईलाई सचेत हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई कभर गर्नुहोस्। आफैलाई लाड, ड्रेस अप र आफ्नो एक्लोपन मा डुब्न कोसिस नगर्नुहोस्, eएक सम्बन्धको अन्त्य एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण हो जुन स्वास्थ्य र धैर्य संग गरिनु पर्छ .
४. आफूले विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्नुहोस्
भरपर्दो साथीलाई आफ्नो बोझ हटाउन सक्छ एक व्यक्तिलाई आफ्नो असुरक्षा हटाउन मद्दत गर्नुहोस्। बोल्दा हाम्रो हृदयलाई हामीले भित्र बोकेका सबै चीजहरू छोड्न मद्दत गर्छ र हामी बाँचिरहेका तनाव र चिन्ताहरू बुझ्न सजिलो बनाउँछ। आफ्नो भावना बुझ्न प्रयास गर्नुहोस् अर्को दृष्टिकोणबाट स्थिति हेर्नुहोस्।
5. मानिसहरूबाट प्रेरित हुनुहोस् जसले यसलाई पार गरेका छन्
एक ब्रेकअप प्राप्त गर्न सजिलो छैन, र तपाईंलाई सम्भवतः यो गर्न समस्या हुनेछ। यो ब्रेकअप हटाउन सकिन्छ भनेर हेर्नको लागि राम्रो तरिका हो हामीले प्रशंसा गर्ने र यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएका मानिसहरूबाट प्रेरित हुनुहोस्। यसरी, उनीहरूले कसरी अलगावलाई जितेका छन् भनेर बुझेर हामी उत्प्रेरित हुन सक्छौं।
तपाईंले यी सन्दर्भहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
वेबसाइट र ब्लगहरू: त्यहाँ च्यानलहरू विशेष रूपमा सदस्यहरूका लागि तिनीहरूको समाप्ति सहित स्वस्थ सम्बन्धहरू कसरी राख्ने भनेर सिक्नको लागि सिर्जना गरिएका छन्।
नेटवर्कमा भिडियो वा प्रकाशनहरू: सञ्चारको द्रुत माध्यम भएकोले, हामीसँग सधैं कसैको बारेमा कसैलाई कसरी बिर्सने भन्ने बारे सल्लाह हुनेछ।
साथीहरूबाट सुझावहरू: यदि एक नजिकको साथीले समान परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने, उहाँसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र उसले गरेको परिवर्तनबाट प्रेरित हुनुहोस्।
6. पीडा संग धैर्य हुनुहोस्
यद्यपि यो असम्भव देखिन्छ, तपाईंले ब्रेकअपबाट महसुस गरेको पीडाबाट मुक्त हुनुहुनेछ। यसका लागि तपाईले आफ्नो पीडालाई सम्मान गर्न र यस अलग हुने प्रक्रियालाई शान्तपूर्वक जिउन आवश्यक छ। आफूले मन पराउने व्यक्तिबाट अलग हुने पीडालाई जित्ने प्रयास गर्दा, रमाइलो गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहोस् र आफ्ना नजिकका साथीहरूको समर्थन खोज्नुहोस्।
साथै, आफूलाई कसैसँग तुलना नगर्नुहोस् जसले ब्रेकअपलाई छिट्टै पार गर्न सफल भयो। परिपक्व र जिम्मेवार तरिकामा यो विभाजन प्रक्रिया गर्न आफ्नो दिमागलाई समय दिनुहोस्।
7. वर्तमानमा फोकस गर्नुहोस्
आफुले माया गर्नेलाई कसरी बिर्सने भन्ने बारे सातौं सुझाव हो सँगै भविष्यको कल्पना नगर्नुहोस् वा विगतलाई समात्नुहोस्। एउटा सामान्य गल्ती भनेको वर्तमान र यसको परिपक्वतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा हुन नसक्ने वास्तविकताहरूको कल्पना गर्नु हो। थप रूपमा, तपाईंले ब्रेकअप हुनुको कारणहरू बुझ्न आवश्यक छ, विश्लेषण र सम्झना छ कि स्थिति राम्रो थिएन र तपाईं दुवै ठीक थिएनन्।
८. आफ्नो पूर्वका कमजोरीहरू सम्झनुहोस्
जब हामी एक व्यक्तिबाट अलग हुन्छौं तब राम्रोलाई मात्र सम्झने बानी हुन्छ, तर याद गर्नुहोस् यदि तपाईंले यसलाई छोड्नु भएको छ भने, यो किनभने सबै कुरा यति मीठो थिएन। प्रयास गर पुनरावृत्तिबाट बच्नको लागि तिनीहरूका त्रुटिहरू र नकारात्मक मनोवृत्तिहरूको बारेमा सोच्नुहोस् वा एक उत्तम सम्बन्ध कल्पना गर्नुहोस्। यो सबैको मतलब यो होइन कि तपाईंले यसलाई घृणा गर्नु पर्छ, यसबाट टाढा, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले यसलाई वेदीमा राख्नुभयो।
9. तपाईलाई मनपर्ने कुरामा लगानी गर्नुहोस्
जबसम्म तपाईंको हृदय निको हुन्छ, तपाईं सक्नुहुन्छ आफ्नो मन आफूलाई मन पर्ने गतिविधिहरूमा केन्द्रित राख्नुहोस्। तपाईं पुरानो गतिविधिहरूमा फर्कन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई मनपर्‍यो वा नयाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई आनन्द दिन्छ। उपलब्धिको भावनाको अतिरिक्त, यस तरिकाले तपाइँसँग दिनचर्या र शौकहरू हुन सुरु हुनेछ जुन तपाइँको पूर्व संलग्न हुनेछैन।
10. आफैलाई दोष नदिनुहोस्
एउटा सामान्य गल्ती भनेको ब्रेकअप मात्र तपाईको गल्ती हो भन्ने सोच्नु हो। दोषी महसुस नगर्नुहोस् तपाईं काममा पुग्नुभएको छैन भन्ने सोच्दै, हामी प्राकृतिक त्रुटिहरू र महत्वाकांक्षाहरू भएका मानवहरू हौं र, त्यसैले, हामी गल्ती गर्ने खतरामा छौं। साथै, सम्बन्धमा असंगतिले मानिसहरूलाई टाढा लैजान सक्छ।
त्यसैले सम्झनुहोस् तपाईं दुवैले यो निर्णय गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ र त्यो, यद्यपि यसले दुख्छ, भविष्यमा तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो तपाईंले गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा राम्रो कुरा भएको छ।
11. आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई बिर्सनका लागि मन्त्रहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्
ब्रेकअपको खोजीमा, केहि व्यक्तिहरू एक व्यक्तिको बारेमा बिर्सनका लागि हिज्जे कास्टिङको सहारा लिन्छन्। अर्को, हामी तपाईंलाई प्रदर्शन गर्न एउटा उदाहरण दिनेछौं:
सेतो कागजमा बिर्सन चाहेको व्यक्तिको पूरा नाम लेख्नुहोस्।
कागजलाई पानीमा फ्याँक्नुहोस् र निम्न वाक्यांश तीन पटक दोहोर्याउनुहोस्: "यस नदीको मोडमा, मलबे रोकिन्छ। तिमि मेरो जिबनमा एउटा लग जस्तै थियौ। जीवनको धारामा तिमी अब बितेका छौ।
यो अभ्यास गर्नको लागि तपाईमा विश्वास हुनुपर्छ कि यसले काम गर्छ। यो एउटा मानसिक व्यायाम जसले तपाईंलाई यो व्यक्तिलाई बिर्सन मद्दत गर्दछ, एक हिज्जे भन्दा बढी र विजय र बिर्सने को प्रतीकात्मक मूल्य छ।
मन्त्रको अतिरिक्त, धेरै मानिसहरू हराएको प्रेम बिर्सन प्रार्थनामा फर्कन्छन्। छोटकरीमा, यो तपाईंको जीवनबाट पूर्व प्रेम हटाउन अर्को मानसिक अभ्यास हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भावना र दैनिक जीवनसँग व्यवहार गर्दा तपाईंले महसुस गर्नुहुने पीडाबाट छुटकारा पाउन यो ध्यान हो।
यो जति जटिल हुन सक्छ, आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई कसरी बिर्सने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु तपाईंको लागि लाभदायक हुनेछ। अब हामीसँग जोड्ने र हाम्रो इच्छाहरू सुन्ने समय हो। स्पष्ट दिमागका साथ हामी आफैलाई सल्लाह दिन र मानवको रूपमा परिपक्व हुन सक्षम छौं।
हामी यस लेखबाट आशा गर्दछौं खोजी गर्नुहोस् यसले तपाईंलाई मद्दत गरेको छ र, यदि तपाईं यस अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, याद गर्नुहोस् कि यो पीडा समाप्त हुनेछ। ब्रेकअप पछि सुरुका केही दिनहरू सम्भवतः गाह्रो हुनेछ, तर तपाईंले चाँडै फेला पार्नुहुनेछ कि तपाईंले कसैलाई प्राप्त गर्न आवश्यक छ।